हेलिकप्टर बुक गरेर सोनीकासंग पारस घुमघाममा व्यस्त ! हिमानी डिभोर्सको तयारीमा – Life Nepali
हेलिकप्टर बुक गरेर सोनीकासंग पारस घुमघाममा व्यस्त ! हिमानी डिभोर्सको तयारीमा
उनी म्याग्दी हुँदै बुधवार दिउँसो मुस्ताङ पुगेको बताइएको छ । हेलिकप्टर चढेर अन्नपूर्ण बेसक्याम्प पुगेका पारस मुस्ताङ जाँदा २ वटा पजेरो जिप र ६ वटा मोटरसाइकलमा गएका थिए । भ्रमणमा रहेका पूर्वयुवराज पारसले तस्वीर खिच्न चाहनेसँग तस्वीर खिचाइरहेका छन् । शाहले बा १४ च २१३१ नम्बरको गाडी चढेका छन् । यता सोनिकासँग पारस नजिक भएपछि पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहले डिभोर्स दिने तयारी गरेकी छिन् । निर्मल निवास स्रोतले हिमानी डिभोर्स दिन लागेको दाबी गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् – धवलागिरि हिमाल आरोहणका लागि ३१ जनालाई अनुमति
काठमाडौं– यस वर्षको शरद याममा संसारको सातौँ अग्लो धवलागिरि हिमाल (८१६७ मि) को आरोहणका लागि तीन समूहका ३१ जनाले अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभाग पोखराका अनुसार कात्तिकको पहिलो सातासम्म शरद याममा धवलागिरि हिमाल आरोहणका लागि ३१ जनाले अनुमति लिएको र उनीहरुबाट रु ३२ लाख रोयल्टी प्राप्त भएको छ । यस वर्षको शरद यामका लागि पर्यटन विभागले कात्तिकसम्म दिएको अनुमतिबाट रु ३२ लाख आठ हजार पाँच रोयल्टी उठेको छ ।
म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीमा पर्ने धवलागिरिको पश्चिम मोहडाबाट आरोहण गर्ने अनुमति लिएको जनाइएको छ । धवलागिरि गाउँपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको सिमाना तथा छिमेकी जिल्ला मुस्ताङबाट समेत धवलागिरि हिमालमा जान सकिने भए पनि नियमित आरोहणका लागि पश्चिम मोहडा नै आरोहीहरुको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । अनुमति लिने क्रम निरन्तर हुने भएकाले धवलागिरि हिमाल आरोहणमा आरोहीको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गरिएको विभागले जनाएको छ । सन् १९६० मे महिनाको १३ तारिखमा अष्ट्रेलियन नागरिक कुर्ड डिम्बकरणले पहिलोपटक धवलागिरि हिमालको आरोहण गरेको रेकर्ड देखिन्छ ।
Previous यस्तो छ आज शुक्रबार नोभेम्बर ०८ तारिखको विदेशी मुद्राको बिनिमयर दर-रेट !
Next किसानले बाेरामा भरेकाे धानलाई प्रहरीले खेतबाटै चाै’कीमा लग्यो !